Ukubonisa ngale kuyakhethwa, Ubuqiniso akuyona | Martech Zone
Ukubonisa ngale kungakhethwa, ubuqiniso akunjalo
NgoLwesithathu, Septemba 10, 2014 NgeSonto, ngoJulayi 19, i-2015 Douglas Karr
Eminyakeni embalwa edlule, ngibe sesimeni esihle sokuhlanganyela iningi lempilo yami yangasese ku-inthanethi. Ngabelane kakhulu ngohambo lwami lokwehlisa isisindo, ngiphikisana nezepolitiki nemfundiso yenkolo, ngihlanganyela amahlaya namavidiyo angenambala, futhi muva nje - ngihlanganyele kusihlwa lapho bengiphuze khona iziphuzo ezimbalwa. Angisona ngokuphelele obala online, kepha ngiqinisile impela.
Okuthiwa kwami obala kuyinto yokunethezeka. Ngisondela eminyakeni engama-50 ubudala, nginebhizinisi lami, ngiphila impilo emnandi ngingenasifiso sokuqongelela izigidi. Abangani bami bayangithanda ukuthi ngihlanganyela kakhulu online futhi amabhizinisi engisebenza nawo ayangazi futhi ayangithanda. Abanye abantu ojwayelene nabo kwesinye isikhathi abakwazisi… ngokukhonona kobuwula nokudla inyama. Nginabangane namakhasimende anele, noma kunjalo, ngakho-ke anginandaba nokuthi abanye bacabangani.
Angizisoli ngokwabelana nganoma yini enginayo ku-intanethi. Nginomuzwa onamandla wokuthi abanye abantu kufanele bezwe izingqinamba zami futhi babone okuhle nokubi kwempilo. Ngikholwa ukuthi iningi lethu ligcina isimo samanga online. Sithumela izithombe zomndeni wethu ophelele, ukudla kwethu okuhle, iholide lethu elihle, indlu yethu ephelele… futhi anginasiqiniseko sokuthi kuyasiza ngempela. Cabanga nje ngokuba ngumnikazi okhokhelayo noma ongumnikazi webhizinisi futhi ufunda nje isibuyekezo ngemuva kokuvuselelwa kokuthi umhlaba umuhle kanjani futhi ibhizinisi lihle usuku nosuku, umuntu angazibuza ukuthi ngabe bakhethelwe lokhu.
My obala angizami ukonakalisa noma ukuzakhela idumela online, kumane kungimi. Ngabelana kakhulu ukuze ngazise abanye abantu ukuthi nginezinsuku ezinhle, izinsuku ezimbi, izinsuku ezimbi, futhi kwesinye isikhathi okunye ukunqoba okuncane engifuna ukukugubha nabanye… noma ukwehluleka engingakusebenzisa kwezinye izeluleko. Ngifuna ukuthembeka ngakho ngabelana ngangokunokwenzeka phakathi kwesizathu. (Akekho owabelana ngakho konke!)
Lapho ngibona impilo yomuntu othile eku-inthanethi futhi ngibona ukuphelela kuphela, ilahla intshisekelo yami nenkolelo yami yokuthi kukhona ubuqiniso esithombeni abasenzayo. Ngiyakhathazeka futhi amagama abo anethonya elincane, uma akhona. Uma bezimisele ukuqamba amanga ngempilo yabo online, kungenzeka bazimisele ukungiqamba amanga kwezinye izinto.
Isilinganiso sokubonisa ngale
Ngizokwengeza ukuthi abanye bamane bagadiwe ngoba kufanele baphathe umkhumbi oqinile… ngiyakuhlonipha lokho. Uma ukhuphuka embonini futhi inhloso yakho ukuqhubekela phambili egumbini lebhodi, awunakho ukukhetha okuningi. Siphila emphakathini wokwahlulela kakhulu futhi ukwenza umsebenzi wobuchwepheshe kungaba yisidingo. Futhi kungahle kube yingxenye yobuntu bakho ukugcina izinto eziyimfihlo zisondele futhi wabelane ngezinto ezijwayelekile. Kuzona zozimbili lezo zimo, kusengaba yiqiniso, noma kunjalo. Ngigxeka kuphela abantu bamanga.
Amabhizinisi kuyaqabukela ekhuluma ngokungalungile kwi-inthanethi futhi angazi noma yini esobala. Ngenkathi uhhafu wawo wonke amabhizinisi ehluleka, kuyaqabukela uzwe noma yini ku-inthanethi ngomzabalazo wenhlangano kuze kwephuze kakhulu. Emnothweni onzima, lokho kuyishwa. Ngicabanga ukuthi sidinga ukwabelana kabanzi ngezinselelo ezisembonini yethu ukuze izinkampani eziningi kungadingeki zenze amaphutha afanayo esiwenzile.
Iphuzu lami yilokhu… uma konke owabelana ngakho kwinethiwekhi yakho yokuxhumana nomphakathi, amakhasimende namathemba kungumbono ongamanga wokuthi yonke into ilungile, awusobala futhi ngeke uthenjwe. Awuthembekile. Uma wabelana kakhulu ubeka engcupheni yokunciphisa amathuba akho ngoba abantu bayahlulela. Kufanele uthole uhla lokusobala oluzuzisa wena kanye / noma ibhizinisi lakho. Imayini ivulekile impela, kepha eyakho kungenzeka ingabi njalo. Qhubeka ngokuqapha.
Mhlawumbe kufanele sibize isu lethu eliku-inthanethi ukuguquguquka, kungaba incazelo enembe kakhudlwana.
Ungawandisa Kanjani Amathuba E-imeyili Yakho Okungena Ebhokisini Lemilayezo Engenayo
Izinzuzo Zokumaketha Nezokuthengisa ze-Marketing Automation
Sep 11, 2014 ngo-9: 19 PM
Kuhle futhi kucacile uDoug.
Into enhle ngokuba yiqiniso ukuthola ukuthi obani abangane bakho bangempela.
Sep 11, 2014 ngo-9: 24 PM
Amazwi okuhlakanipha, LindaSherman!